RASMI: Taariikhda la ciyaari doono, qaabka kulammada ay noqon doonaan, Magaalada lagu beddelay Istanbul & UEFA oo go’aamisay qaabka loo dhammeystiri doono Champions League – Gool FM
RASMI: Taariikhda la ciyaari doono, qaabka kulammada ay noqon doonaan, Magaalada lagu beddelay Istanbul & UEFA oo go’aamisay qaabka loo dhammeystiri doono Champions League
Dajiye June 17, 2020
(Yurub) 17 Juun 2020. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa ugu dambeyn go’aan ku gaaray in tartanka Champions League qaab kooban loogu dhammeeyo magaalada Lisbon muddo 12 maalmood ah oo ka mid ah bisha Agoosto.
Tartanka horyaallada Yurub ayaa loo dhammeystiri doonaa qaabka Koobka Adduunka oo kale marka la gaaro wareeggiisa siddeed dhammaadka.
Kaddib marka la dhammeystiro afarta kulan ee ka harsan tartanka UCL, waxaa wareegga rubac dhammaadka loo ciyaari doono kulammo hal is-arag ah oo ka dhici doono dalka Portugal.
Dhanka kale, kooxaha marka ay dalkaas tagaan ma gali doonaan wax karaantiil ah, iyadoo koox walba la dajin doono hoteel gaar ah oo ka fog goobaha bulshada si loo ilaaliyo xeerka kala fogaanshaha.
Sababta ay UEFA u dooratay in bisha August la ciyaaro tartanka Champions League ayaa ah in waqti ku filan ay dalalka Yurub u helaan dhammeystirka horyaalladooda.
Habka koob-yaraha ama qaabka siddeed dhammaadka ayaa 12 Agoosto ka billaaban doona magaalada Lisbon, iyadoo final-kana la ciyaari doono 23-ka isla bisha Agoosto.
Afar maalmood oo xiriir ah ayaa la ciyaari doonaa wareegga rubac-dhammaadka, maadaama ay kulammada min hal lug yihiin, sidoo kalena wareegga nus-dhammaadka ayaa la ciyaari doonaa 18-ka iyo 19-ka bisha Agoosto iyadoo afar maalmood kaddibna finalka lagu ciyaari doono garoonka Estadio da Luz.
Geesta kale magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo lagu madalsanaa inay final-ka sanadkaan marti galiso ayaa laga wareejiyay, balse taas baddelkeedana waxaa lagu abaal-mariyay inay sanadka dambe ee 2021-ka ay marti galiso final-ka Champions League.
Illaa iyo hadda, kooxaha xaqiijiyay inay gaareen wareegga siddeed-dhammaadka tartankan waxay kala yihiin kooxda France ka dhisan ee PSG, naadiga Atalanta ee ka dhisan dalka Talyaaniga, Spain kooxda ka socota ee Atletico Madrid iyo RB Leipzig ee matalaysa dalka Jarmalka.
Kulammada wareegga 16-ka ka harsan ee kala ah ciyaarta Manchester City ay soo dhoweyneyso Real Madrid, safarka ay Chelsea ugu tageyso Bayern Munich, ciyaarta Juventus ay garoonkeeda ku soo dhoweynayso Lyon iyo kulanka ay Napoli ku booqan doonto Barcelona dalka Spain.
RASMI: Afar Magaalo oo kala duwan oo marti gelin doona tartanka Europa League & Halka uu isku aadku ka dhici doono oo la shaaciyey
RASMI: Kooxda Napoli oo heshiis cusub ka saxiixatay Dries Mertens saacado yar ka hor Final-ka caawa ee Coppa Italia… (Meeqa sano ayuu qalinka ugu duugay?)